Ny androm-piainana 52 an'ny Idea dia manomboka amin'nyblôginao
Raha te hiverina matetika any amin’nyblôginaony mpitsidika tranonkala，dia mila manome azy ireo fitaovana vaovao hamaky ianao。 Ilaina ny mahafantatra fa afaka matoky anao izy ireo hanome torohevitra tsara azy ireo ary hanome azy’mininny fandaharam-potoana tsy tapaka。 Mety hanontany tena aloha ianao hoe firy no tena mila mamorona lahatsoratra bilaogy vaovao.
Na dia tsy misy valiny tapaka sy maina aza amin’ity fanontaniana ity，misy ny sekoly sasany mieritreritra ny azonao atokana ho an’ny bilaoginao manokana.
约翰·兰普顿（John Rampton），潘妮·潘妮（Apan’y） "贝贝·科科阿·哈特兰尼". Avy eo izy dia nanohy ny tantarany avy amin’ny HubSpot妈妈吧ireoblôgyizay mandalo matetika.
Misy orinasa iray mamoaka mihoatra ny 16 hafatra iray isam-bolana telo sy tapany sy sasany ny fifamoivoizana tahaka izay nandefasana imbetsaka isam-bolana fotsiny。 Noho izany，raha te hampiasa或io ianao dia mila hamoaka lahatsoratra voalohany indimy in-efatra isan-kerinandro.
1 Mitazam-potsiny matetika
1.1 托罗＃1。莫达纳（Mamorona fandaharam-potoana）
1.2 托罗＃2。迈拉卡（Miaraka Amin’ny Hevitra Vaovao）
1.3 托罗＃3。 Mametraha Tanjona Ho Avy
2 Mianatra bilaogy mahomby amin’ny fanentanam-panahy
3 Ny Hevitra 52 Dia Manom​​boka
Ny lahatsoratra efatra isan-kerinandro dia mety tsy hihoatry ny feo，fa ny fiainana dia miezaka ny mandeha amin’nylàlana。 Manana orinasa mihazakazaka ianao，fianakaviana iray mitazona izany，ary mety ho tombontsoanao manokana sy raharaham-barotra vitsivitsy izay maka ny fotoanao。 Ny soratra dia mety ho tsy mety ho anao，ary ny fananganana hevitra vaovao efatra isan-kerinandro dia mety hetra.
Rehefa takiana aminao ny handefa matetika izany，dia miora be ny mihazakazaka miditra amin’nyalàlan’nympanoratra。 Soa ihany，misy zavatra azonao atao mba hiasa amin’nyalàlan’nysisan-tsoratry ny mpanoratra，mitadiava hevitra vaovao，ary mifikitra amin’ny fandaharam-potoana.
Pikantsary amin’ny pejy Lifestyle赫芬顿邮报
Diniho ny iray amin’ireo tranonkalam-baovao malaza indrindra ao amin’ny互联网，New Huffington Post。 Ny famerimberenany matetika dia mety ho anisan’ny antony mahatonga azy Telo isan-jato ny mpitsidika 110. Misy dingana maromaro azonao atao mba hamoronana famoahana famoahana izay matetika，nefa miasa ho anao.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mipetraka ary manamboatra fandaharam-potoana hamoahana ny tranokalanao。 Na dia mey tsara aza ny lahatsoratra efatra amin’ny herinandro，dia mety ho eo amin’ny toerana tsy ahafahanao mitantana azy fotsiny ianao。扎拉·扎尼（Tsara izany）。 Raha indray mandeha isan-kerinandro ny zava-drehetra azonao atao，dia manaova fandaharam-potoana handefasana indray mandeha isan-kerinandro.
Ny hafatrao dia tokony ho azo ambara ho an’ny mpamaky anao，noho izany dia fantany ny fotoana hikatsahana ny lahatsoratra。 Azonao atao，ohatra，ny mandefa ny Zoma amin’ny 1 pm ary hizara amin’ny media sosialy amin’ny fotoana iray ihany。 Ny mpamaky sy mpanaraka anao dia hanantena izany，koa mitandrema hafatra vitsivitsy amin’ny filaharana mba haha​​feno ireo zavatra andrasana.
托罗＃2。迈拉卡（Miaraka Amin’ny Hevitra Vaovao）
Tsy mora ny manatona hevitra vaovao。 Vantany vao nandia ny fototry ny faritra misy anao ianao，dia mey hahita olana be aminao na votoaty vaovao。 Soa Ihany Fa Misy Zavatra Azonao Atao Mba Hahatongavana lahatsoratra Tsy Manam-Paharoa.
Ampiasao manomboka ireo hevitra（hanomezako anao 52 minitra）
Vakio ny bilaogin’ny mpifaninana。 Azafady MBA Tsy Mandika。 Mahazo fitaomam-panahy fotsiny ianao ary mahita izay tsy norakofany na izay nilaina lalina kokoa.
Vakio ireo blaogy ivelan’ny fonosanao。 Indraindray ny hevitra tsara indrindra dia avy amin’ny faritra ivelan’ny faritra misy anao manokana.
Mandania fotoana kely hanaovana zavatra hafa momba ny famoronana Mameno ny "法莫罗纳纳察拉" 安娜奥.
Henoy ny mozika mba haha​​zo aingam-panahy.
托罗＃3。 Mametraha Tanjona Ho Avy
Vantany vao manana fandaharam-bilaogy misy ianao，dia jereo ny tanjona tianao hapetrakao。 Rehefa mitombo ny tranokalanao ary mitombo ny fidiram-bolanao dia托科尼afaka manakarama mpanoratra ianao na mampitombo ny fotoana ampidirinao ao anaty bilaogy.
您现在的位置是：1 anan-kerinandro ianao dia mety hametraka tanjona hanoratanao indroa izany tamin’ny antsasaky ny taona ary hanoratra lahatsoratra 2 isan-kerinandro。 Ny antony fotsiny dia manamboatra fandaharam-potoana dia tsy midika hoe tsy afaka manampy azy ianao。 Atombohy amin’ny tanjona tratrarina ary azonao atao hatrany ny tanjonao.
Mianatra bilaogy mahomby amin’ny fanentanam-panahy
Ny fomba iray ahafahana mametraka nyblôginaomanokana amin’ny fomba mahomby sy mitazona ny hevitra mikoriana dia ny hianatra bilaogy mahomby hafa.
Andao hiverina任何敏锐ok ary hojerentsika ilay izy。 Misy Antony Tohizako Hatrany Mombaity Transonkalaity-Mahomby.
ay！ Na Dia Mey Tsy Afaka hanomboka hikasika ny haavon’ny famoahana amin’ny tranokala kely（na somary lehibe aza）ianao dia mampiseho ny maha-zava-dehibe ny famoahana matetika.
Neil Patel dia mpamaham-bolongana mahomby izay mandinika tsara ny ataon’ny bilaogera hafa。 Mety ho efa naheno ny anarany izy raha efa ela dia tany amin’ny faribolana bolongana。纳马里卡·帕特尔·纳莫马比·阿扎·尼·特兰科卡拉·托夫·安妮·赫芬顿邮报，米西·比拉格里拉·马洪比·马罗·哈法·扎伊西·托伊·玛米塔·阿法蒂·阿米尼·赫里南德罗·福辛尼。 Ny lakile，hoy i Patel，dia ny Tsy mamorona afa-tsy votoatiny fotsiny ihany fa "脚趾头".
曼纳娜娜·帕特尔（Manamarina i Patel fa mbola betsaka kokoa ny famoahana an-tserasera fa tsy manangana lahatsoratra maro araka izay azonao atao ary miresaka momba ny lanjan’ny tetika henjana hanaovana izany）。 Ny fandaharam-potoanao no dingana voalohany amin’izany.
克里斯·霍纳克（Chris Hornak），《博客之手》（Tompon’ny Blog Hands），《每日新闻》，《每日新闻》。霍伊霍纳克：
Manom​​boha Amin’ny Teny照片从Amampiasao到Fitaovam-Pikarohana照片/ Lohahevitra mba hamoahana Lohahevitra maro samihafa.
Avy eo，rehefa manomboka manoratra lohahevitra ianao dia avereno jerena ny valin’ny 10 ambony indrindra momba an’io fikarohana io ary er jereo ny fomba ahafahanao manome zavatra manan-danja kokoa na tsy manam-paharin noho’菲卡罗哈纳.
Ny soso-kevitr’i Hornak dia marani-tsaina，萨特里亚·米哈里·洛哈维特拉·伊雷·伊萨伊·卡扎欣·妮·奥洛纳·霍耶雷纳·阿里亚诺.
Ny Hevitra 52 Dia Manom​​boka
Ary izao，tsy mila ado intsony，andao haha​​tongavanao izay tena nalehanao teto。 Ireo hevitra vao manomboka ireo dia manome anao hevitra momba ny lahatsoratra ao amin’ny bilaogy ho an’ny tranokalanao.
Afaka mampiasa ny lisitry ny hevitra 52 manomboka amin’ny fomba roa samy hafa。 Azonao atao ny mampiasa ny hevitra tsirairay hanomboka amin’ny lahatsoratra iray isan-kerinandro。 Na，azonao atao ny mampiasa ny hevitra fanombohana ary manangana lahatsoratra maromaro momba ny lohahevitra mandritra ny herinandro。 Hiankina be dia be ny habetsahan’ny bolongana kasainao isan-kerinandro.
Ohatra amin’ny tena fiainana：Vakio ny dia dian’ny Groove ny vola $ 1000万.
拉哈（Raha）Manana Toeram-Pisakafoanana golf ianao，阿佐那奥阿陶ve ny milaza tantara妈妈巴ny lalao golf tsara indrindra?
sy ny tsirairay no mividy vokatra。 Indraindray Tsy maintsy mivarotra ny marika sy fo ao ambadiky ny marika ianao.
Eritrereto ny zavatra tena mahagaga izay mety hitranga，fa toa tsy ho vita mihitsy，amininny orinasanao。 Ankehitriny，sarao ny tretreritrao sy ny nofinanao amin’ireo mpamaky anao。 Ity no karazana fanta-daza。任何amin’ny tontolo iray tena tsara，ny mpilalao高尔夫rehetra dia mahazo ny lavaka amin’ny iray.
Azonao atao ny maka fampitandremana，ahiahy，na manohintohina ny statistika ary mametraka azy ao anaty lahatsoratra bilaogy.
Raha mivarotra sakafo alika avo lenta ianao，dia afaka mizara fampahalalana momba ny fampahatsiahivan’ireo biby fiompy amin’ny taona vitsivitsy lasa izay sy ny antony ananan’ny alika ny mpamaky anao.
Mihady Lalina Kokoa：Alao i Jason toro-hevitra蒙巴ny赛纳sy ny fanaovana hosoka amin’ny Twitter数据分析.
Indraindray，ny fomba fitondra-tena tsara efa tranainy dia ny zavatra tsara indrindra azonao soratana。 Mety hieritreritra ianao hoe tsotra loatra izany，kanefa misy olona tsy nampiasa ny vokatra na ny serivisy na oviana na oviana dia mety mila fanazavana amin’ny antipiriany.
Ohatra tena misy：WP Kube的Resaka tsara indrindra amin’ny WordPress ho an’ny voalohany.
Jereo ny Valin-Kevitrao，论坛，媒体不公开.
Inona ireo fanontaniana sasantsasany izay tsapan’ny mpamaky anao matetika？ Mety te-hiverina amin’nyalàlan’nymailaka taloha avin’ny mpanjifa mihitsy aza ianao。 Ahoana no hamalianao ireo fanontaniana ireo?
Ohatra amin’ny tena fiainana：Jereo hoe inona no mahatonga an’i Jerry halatra bilaogy iray.
Manahy ve ianao fa tsy hahomby amin’ny serivisy mpanjifa?
Zarao izany ary anontanio azy ireo ny valin-teniny marina momba ny fomba ataonao。 Tandremo mba tsy ho tonga feo toa mikotrika na mangataka fanamarinana，na izany aza，萨特里亚tsy dia tsara ny fandraisan’ny mpamaky izany.
Makàzavatra tsotra ary tantarao amin’ny lohahevitrao。 Azonao atao，ohatra，ny mikarakara boban-java-nify iray ary miresaka momba ny andro sy ny andro fa ny bobongolo dia manampy anao ho salama amin’nyalàlan’nyfanesorana bakteria avy amin’ny nifinao，manampy anao hitsikitsiky kokoa。 Avy eo，tsy maintsy ilazanao izany amin’ny lohahevitrao。 Azonao atao koa ny manoratra toy ny borosy nify，ny maha-mpikambana anao amin’ny lalao golf eny an-toerana dia afaka manompo anao andro aman’alina ary mitandro ny fahasalamanao amin’ny fialam-boly，sns.
Indraindray ianao dia mila miezaka kely hanatrarana ity hevitra fanombohana ity，saingy zavatra tsara izany satria mety hieritreritra hevitra hafa hanoratanao ihany koa ianao.
Misy olona afaka manadinadina olona mahafantatra tsara momba ny lohahevitra mifandraika amin’ny liam-pandrenesana？ Azonao atao ny manamarika fa ato amin’ny WHSR isika dia manao dinidinika maromaro miaraka amin’ny manam-pahaizana amin’ny zavatra玩具ny fampiantranoana，WordPress插件mpamorona，mpangalatra，sns.
Ny fanadinadinana ny hafa dia mey hitondra fampahalalana izay mety tsy hoeritreretinao raha tsy izany.
Amin’ny maha-bonus azy，mey hanadinadino anao amin’ny tranokalany izy ireo na hiverina aminao koa.
深入了解：Fantaro ny fomba famoronana sary mahafinaritra.
Zarao Miaraka阿明尼mpamaky anao izany.
Misy teny nindramina izay ilainao matetika ho famporisihana na famporisihana？ Ho ahy dia tiako tononkalo izay matetika misy an’i Ralph Waldo Emerson mitondra ny lohateny hoe Fahombiazana（ny loharanom-baovao sasany dia nanoratra azy fa olon-kafa no nosoratany，fa toa ny diksionany kosa a homin Raka a homin Raka mpanoratra）。 Somary lava kokoa ny tononkalo，fa ny ampahany lazaiko matetika dia any amin’ny farany ka lasa：
"Mba haha​​fahana mamela izao tontolo izao ho tsara kokoa，na amin’ny alalan’ny zaza salama，zaridaina zaridaina，na fepetra sosialy voavotra； Mba haha​​fantaranao fa na dia iray monja aza dia niaina mora kokoa noho ny niainanao。伊扎尼·哈莫比. "
Azoko atao mora foana ny mamadika izany amin’ny lahatsoratra bilaogy momba ny filozofia amin’ny mpiara-miasa amiko ary manandrana ny fomba tsara indrindra hanampiana azy ireo hiaina mora kokoa。 Ny orinasa mihazakazaka dia sarotra ary manatona azy ireo amin’ny maha-mpiara-miasa aminy mba haka ny faneriterena azy dia zavatra tiako atao.
Ireo Lisitra dia mora vakina ho an’ny mpitsidika ny habaka。 Inona没有azonao atao？ Raha mivarotra kiraro akanjo，azonao atao ny mamorona lisitry ny zavatra 10 ambomi mifandraika amin’ny akanjom-bolo efa tranainy.
Ohatra tena misy：Pardeep Goyal的tantaran’i Rs。 0 hatramin’ny 2,000,000 amin’ny volana 6.
Sariho ny lohahevitra fototra momba ny tranokalanao，ny vokatrao，na ny orinasa ary hizara amin’ny mpamaky.
Ny loha hevitra摄影图片mifangaro amin’ny avo kokoa dia hampiditra mpanjifa vaovao sy mpanjifa mitohy.
Ohatra amin’ny tena fiainana：Google SEO与My Guest Guest.
Mihoatra Lavitra Noho ny azo inoana fa manana kaonty media sosialy ianao manaraka mba haha​​fahanao mitazona ny loha-hevitrao.
Manaraka na inona na inona ianao Twitter聊天?
Manaova fivoahana mba ahafahanao maamaky azy ireo koa ny mpamaky。何fanampin’ny奖金fanampiny，纽约州萨萨尼·阿明内尔托·米拉帕萨卡·安·佐科索科·ireto dia mety hanome anao ny feo mihetsika ao amin’ny媒体.
Anontanio ny mpanjifanao amin’ny fijoroana vavolombelona iray mba hametrahana sehatra iray misongadina momba ny mpanjifanao sy ny fomba itiavanao ny mpanjifanao。 Na tsara kokoa raha afaka manasongadina ny olana atrehan’ny mpividy iray ianao，ny fomba nametrahana azy，ary avy eo mizara fijoroana vavolombelona。 Izany dia mety haha​​tonga anao hanana fahamendrehana ho anao.
Mamorona播客na lahatsary amin’ny lohahevitrao ianao。图片来源：handikana ny iray ary hizara azy ho lahatsoratra bilaogy。 Tsy ny olon-drehetra no te hijery horonan-tsary，na mety ho any am-piasana izay tsy misy feo。 Na dia izany aza，amin’ny fanoratana azy amin’ny endrika an-tsoratra，dia ahafahanao mizara mora amin’ny olona rehetra izany.
Mitsangànamiaraka amin’ny fandefasana sary an-tsoratra fa tsy lahatsoratra voasoratra.
Mazava ho azy fa tianao ny hamaritra ireo sary，fa ireo dia mety ho fohy sy mamy.
Fialan-tsasatra vao haingana？ Nisy zava-baovao ve？ Zarao Amin’ny lahatsoratry ny sary.
Zarao ny sasany amin’ireo teknolojia tianao indrindra sy ny fomba ampiasanao izany amin’ny fiainanao andavanandro。 Raha azonao atao ny mitantara izany amin’ny nichanao，dia azonao atao ny manazava amin’ny mpamaky anao ny fomba ahafahan’izy ireo mandray soa avy amin’io teknolojia io.
Azavao amin’ny mpamaky anao ny antony maha-zava-dehibe an’io lohahevitra io sy izay tianao ho fantatra。 Iza no mahalala，mety hamporisika anao hanoratra boky ny lahatsoratra.
Misy lohahevitra tena tianao ve haha​​fantaranao bebe kokoa？ Zarao izany miaraka amin’ireo mpamaky anao ary hazavao ny zavatra efa fantatrao sy ny fomba ahafahanao manorina amin’izany fahalalana vaovao izany izay kasainao hikatsaka.
Makàiray minitra mba hanekena ny mpanoro hevitra anao。 Nisy影响者ve nanome torohevitra anao tany am-boalohany amin’ny nahaterahan’ny bilaoginao吗？ Zarao ny mpamaky izany vaovao izany ary ampaherezo izy ireo hahita ireo mpampianatra azy manokana.
Naina inona na inona karazana orinasanao，rehefa nanao izany nandritra ny fotoana kelikely ianao dia hianatra tratrany sy欺骗izay manampy anao hahomby kokoa。 Inona Avy ireo hack Nangoninao tamin’ny fomba mety hamonjy ny fotoana ho an’ireo mpamaky?
Inona Avy Iro Zavatra Nataonao Mba Hampivoatra ny Orinasanao izay Tsy Mandeha?
阿扎·马塔霍特拉（Aza Matahotra），《纽约·拉哈拉姆·巴罗特拉（raraharaham-barotra）》和《曼达洛·阿明洛》（aman’ireny fanaintainana mitombo ireny）。 Ny fizarana azy ireo amin’ny mpamaky anao dia mampiseho fa tena misy ianao ary miainga。 Zarao Koa izay nataonao hanitsiana azy.
Raha te hiverina matetika hər hansı bir amplisitika tranonkala, dia mila manome azy ireo
Ən ucuz Ucuz veb Hosting ($ 5 / ayın altında)
25 правила за писане на луди добри изречения
7 стъпки Är E-Mail organiséieren an d’Héichten и Är Woch ze addéieren